पीसीआर परीक्षण साँघुरो : कोरोनाको डर कम, संक्रमण ज्यादा
कोरोनाको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको ५ नम्बर प्रदेशमा स्वाब संकलन र परीक्षणको गति सुस्ताएको छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रदेशका एउटै जिल्लामा १०० जनासम्म संक्रमित भेटिन थालेका छन् । अझै धेरै व्यक्ति संक्रमित हुनसक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि परीक्षण र ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’को दायरा ह्वात्तै घटाइएको छ ।
सरकारले लक्षण नभएकालाई २ हप्ता आइसोलेसनमा राखेर चेकजाँच विना नै डिस्चार्ज गरी संक्रमितको चाप घटाउने रणनीति अपनाएको छ ।
कोरोनाको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको परीक्षण नगरिने मापदण्ड नयाँ निर्देशिकामा बनेपछि परीक्षणको दायरा घटेको छ । ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा समुदायमा समेत संक्रमण फैलिएको अवस्थामा परीक्षण र जाँचको अवस्था बढाउनुपर्नेमा सरकारले परीक्षण घटाउँदा संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको छ । २ हप्ता क्वारेन्टीनमा बस्दा लक्षण देखिएपछि आरडीटी गर्दा पोजेटिभ आएकालाई मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
प्रदेशमा १२ वटा जिल्लामा ८५ हजार व्यक्ति क्वारेन्टीनमा बसेकोमा २६ हजार ६७९ जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय चिकित्सक संघ लुम्बिनी शाखाका महासचिव डा. सागर न्यौपानेले २ हप्ता क्वारेन्टीनमा बसेर घर पठाउँदा संक्रमितमा रहेको सुसुप्त भाइरस समाजमा पुग्न सक्ने बताए ।
‘नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएर संक्रमण नदेखिएको होइन । संक्रमणले औसतमा ४ हप्तासम्म शरीरमा असर गर्न सक्ने हुँदा धेरैमा संक्रमणको शुरूआतमै समस्या जटिल नदेखिएको हुनसक्छ,’ डा. न्यौपानेले भने, ‘संक्रमण तीब्र र परीक्षण कम हुँदा झनै जोखिम बढेको छ । लक्षण नदेखिएकालाई पीसीआर नगरी पठाउँदा भारत, अमेरिका लगायत देशमा जस्तै संक्रमण विस्फोट हुन पनि सक्ने अवस्था छ । त्यसैले राज्यले जतिसक्दो पीसीआर गरेर घर पठाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ७१३ पुगेको छ । क्वारेन्टीन पनि धमाधम खाली हुँदै गएका छन् । प्रदेशमा झण्डै २१ हजार व्यक्ति क्वारेन्टीनमा रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख योगेन्द्र भगतले पछिल्ला दिनमा स्वाब संकलन ‘स्लो’ भएको बताए । स्थानीय तहले शुरूआती चरणमा राहत वितरण गरेजस्तै ठूलो जनसंख्यालाई संक्रमणबाट जोगाउन मास्क वितरण गर्न आवश्यक देखिएको डा. न्यौपानेले बताए ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको कपिलवस्तुका क्वारेन्टीन खाली भएका छन् । जेठ दोस्रो हप्तासम्म १५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टीनमा रहेकोमा अहिले ६०० जनामा झरेको छ । कपिलवस्तुमा ७ हजार २०० जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ७०० भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित पुगेका छन् ।
कपिलवस्तुबाट १२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई आरडीटी गरेर क्वारेन्टीनबाट घर पठाइएको प्रमुख भगतले बताए । २ हप्ता अघिसम्म प्रदेशका १ हजार ७९७ क्वारेन्टीनमा ४२ हजार व्यक्तिहरू रहेका थिए तर अहिले २१ हजार व्यक्ति मात्रै छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डा. विनोद गिरीले प्रदेशमा अझै ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिने बताए । ‘३ वटा मापदण्ड देखिएकालाई मात्र पीसीआर परीक्षण गरिन्छ । संक्रमित बिरामी, पोजेटिभको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका र आरडीटी पोजेटिभलाई मात्र पीसीआर जाँच गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अझै ८ हजार ८२ जनाको पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।’ प्रदेश सरकारले जोखिम बढ्ने भन्दै आईसीयूको क्षमता ८ बाट बढाएर २५० शय्या पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले मानिसहरू पीसीआर जाँचमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको बताउँछन । राज्यले पीसीआर र आरडीटी जाँचको कुरा बुझाउन नसक्दा मानिसहरूले आरडीटी जाँच गर्न नमान्ने र पीसीआरमा जोड दिएको बताए ।
मोरङ घटनाको नयाँ तथ्य सार्वजनिक